Naorina tamin'ny Aprily 2008, ny orinasa nanao ny fampivelarana avo lenta karbaona fibre products.Two famokarana tsipika nisokatra ny fampandrosoana ny dingan'ny ary atsofony, koronosy, CNC fanodinana.
Orinasa dia nafindra ho any Gaobu Town, Dongguan, Guangdong tamin'ny tamin'ity taona ity, nahatratra faritra famokarana 2500 metatra toradroa, mihoatra ny 10 fametrahana mazava tsara sy ampy fitaovana fitaovana injeniera teknisianina no nanampy mba hanatsarana ny dingana. Hatreto, nisy 4 goavana mpamokatra tsipika anisan'izany karbaona fibre taratasy, karbaona fibre Tube, fanodinana sy ny asa-tanana CNC.
Ny vokatra nankatoavina ISO-9001-2008 rafitra Quality taratasy fanamarinana, vokatra tsara efa upgraded, olona tsara laza nahatratra 99% ny tahan'ny.
Nanatrika ny faha-13 izahay Shanghai International Model Fampirantiana, ary voninahitra ny lohatenin'ny 2015 isan-taona TOP 10 malaza orinasa.